Semalt विशेषज्ञको साथ स्क्र्याप वेबसाइट सामग्री। GitHub - सर्वश्रेष्ठ PHP- आधारित वेब Scraper
यदि तपाईं आफ्नो हार्ड ड्राइवमा चित्रहरू, भिडियोहरू, पाठ वा HTML फाइलहरू डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले वेब स्क्र्यापर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। एक PHP- आधारित वेब स्क्रेपर सजिलैसँग बिभिन्न सर्भरहरू, डेटा स्क्र्यापमा जडान हुनेछ, र यसलाई तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा सजिलैसँग बचत गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, GitHub जुन आफ्नो उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस को लागी परिचित छ, विभिन्न वेब कागजातहरु लाई खुवाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
PHP लाई परिचय:
PHP सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषाहरू मध्ये एक हो। यो विभिन्न वेबसाइटहरुबाट डाटा निकाल्न डिजाइन गरीएको छ। रासमस लेर्डोर्फले १ 199 199 in मा व्यक्तिगत गृह पृष्ठ (PHP) सिर्जना गर्‍यो, र PHP कोडहरू HTML कोडहरूमा इम्बेड गरिएको थियो। तपाईं PHP कोडहरू वेब टेम्प्लेटहरू, डाटा व्यवस्थापन प्रणाली, वेब फ्रेमवर्क र HTML फाइलहरूको साथ मिलाउन सक्नुहुनेछ। वेब सर्भरहरू राम्ररी कार्यान्वयन गरिएका PHP कोडहरू समावेश गर्दछ र हामीलाई बहु वेब पृष्ठहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न मद्दत गर्दछ। जहाँसम्म, तपाईं HTML पाठहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुन्न, तर छवि, भिडियो, र अडियो फाईलहरू सजिलैसँग सामना गर्न सक्नुहुन्छ। PHP स्ट्यान्डअलोन ग्राफिकल अनुप्रयोगहरू र उनीहरूबाट स्क्र्याप जानकारीको लागि पनि उपयुक्त छ।
GitHub ले तपाईंलाई विभिन्न वेब पृष्ठहरू र डाटा स्वत: डाउनलोड डाउनलोड गर्न क्रॉल गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्दछ। यसले एक प्रणालीबाट अर्को फाइलमा फाईलहरू पनि स्थानान्तरण गर्न सक्दछ र यसरी तपाईंलाई गतिशील वेबसाइटहरूबाट जानकारी निकाल्नको लागि सजिलो बनाउँदछ।
१. प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूको लागि उपयुक्त:
GitHub मात्र PHP- आधारित वेब स्क्र्यापर हो जुन ठूलो संख्यामा प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूले प्रयोग गर्दछ। अन्य सामान्य डाटा निकासी कार्यक्रमहरूको विपरीत, GitHub एक सेकेन्डमा १०० पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न सक्दछ र तपाइँको वेब कागजातहरूमा सबै साना त्रुटिहरू फिक्स गर्दछ। एक पटक डाटा पूर्ण स्क्रयाप भयो, तपाई यसलाई अफलाईन प्रयोगको लागि आफ्नो हार्ड ड्राइवमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाटा विश्लेषकहरू जहिले पनि तिनीहरूको वेब निष्कर्षण कार्यहरूको लागि विशिष्ट लक्ष्यहरू सेट गर्दछन्, र उनीहरूले कार्यहरू पूरा गर्न गिथहब प्रयोग गर्छन्। यदि तिनीहरू भर्खरका पोष्टहरूबाट डाटा स्क्र्याप गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूले या त GitHub वा अर्को PHP- आधारित वेब स्क्र्यापर प्रयोग गर्न सक्दछन्। तिनीहरू पृष्ठ शीर्षक र वर्णन क्याप्चर गर्न सक्छन् र इन्टरनेट मा आफ्नो कार्यहरू पूरा गर्न उपयोगी डाटा भेला गर्न सक्छन्।
२. सजिलै प्रयोग गर्न सकिने र भरपर्दो:
GitHub एक विश्वसनीय र प्रयोग गर्न सजिलो वेब स्क्रेपर हो। विद्यार्थीको रूपमा तपाईले यो प्रोग्राम ई-पुस्तकहरू, जर्नलहरू र धेरै संख्यामा लेख स्क्र्याप गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। GitHub अन्वेषक र विद्यार्थीहरूको लागि उपयोगी छ र उनीहरूलाई आफ्नो परियोजनाहरू सजिलोसँग अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। अन्य भाषाहरूको तुलनामा, PHP सिक्नको लागि अत्यन्त सजिलो छ। यदि तपाईं पर्ल र C ++ को वाक्यरचनासँग परिचित हुनुहुन्छ भने, तपाईं PHP चाँडै जान्न सक्नुहुनेछ र यसको वेब स्क्रेपरबाट फाइदा लिनुहुनेछ।
All. सबै अपरेटिंग प्रणालीहरू समर्थन गर्दछ:
आश्चर्यजनक कुरा, GitHub सबै अपरेटिंग प्रणाली र वेब ब्राउजरहरूको साथ उपयुक्त छ। तपाईं आफ्नो मोबाइल उपकरणमा यो वेब स्क्र्यापर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र डाटा स्क्र्यापि tasks कार्यहरू कुनै पनि समय, कुनै पनि समयमा गर्न सक्नुहुनेछ। GitHub को साथ तपाईले आफ्नो स्क्र्याप गरिएको डाटाको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। वास्तवमा, तपाई यसको क्वालिटी अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ जबकि डाटा स्क्र्याप भइरहेको छ। GitHub ले तपाईंलाई पूर्वावलोकन विकल्प प्रदान गर्दछ तपाइँ वेब सामग्री सजीलो हेर्नको लागि।